Wararka Maanta: Khamiis, Sept 7 , 2017-Khilaaf ka taagan Gabar lagu toogtay gobolka Bakool
Maxamed Cabdi Tool oo ah guddoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in baaritaan dheer oo ay sameeyeen kaddib ku ogaadeen in si qalad ah loo dilay Faadumo Cabdullaahi Barre oo aheyd Hooyada ilmo 7 bilood jir ah.
‘’Muddo saddex habeen laga joogo ayeey ciidamadu howlgal u aadeen deegaanka Mooragaabey, waxaa ay halkaa ka soo qabteen labo gabdhood oo mid ka mid ah sidatay Ilmo yar, markii ay ku dhawaad 3km deegaanka kala soo fogaadeen in ayeey toogteen gabadhii Ilmaha yar sidatay’’ ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Bakool.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in taliyaha ciidamada guutada 8aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu amray dilka gabadhan.
Laakiin Col Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Tima-Cadde ayaa iska fogeeyay eedeynta guddoomiyaha isaga oo dhinaca kalana qiray dilka marxuumada.
Taliyaha ayaa ku tilmaamay gabadha la dilay xubin ka tirsaneyd Al-shabaab, isaga oo intaa ku darray in marar badan dagaalo dhaxmaray ciidamada dowladda iyo Al-shabaab raashin iyo caano u geysay xoogagga Al-shabaab.
‘’Gabadhaas Basaas ayeey aheyd, waxaa ay ka tirsaneyd Al-shabaab oo ay caawin jirtay, ciidamada howlgal ay sameeyeen ayeey ku qabteen weyna dileen’’ ayuu yiri taliyaha.
Wali arintan kama aysan hadlin mas’uuliyiinta maamuka Koonfur galbeed oo ay iyagu ka arimiya deegaannada toogashadan ka dhacday.